St. Kitts & Nevis: Fisamborana Mampihenjana Ny Toe-Draharaha Politika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Jolay 2013 16:57 GMT
Natao ny hetsika hanerena ny praiminisitry ny firenena, Denzil Douglas, na hiantso hanaovana fifidianana na hiala eo amin'ny toerany hananganana governemantan'ny firaisana. Teo am-pitarihana ny “Diaben'ny demokrasia” teny amin'ny Lalan'ny Fiangonana (Church Street) i Grant ka nipaka teo amin'ny barazy natsangan'ny polisy to amin'ny fihaonana amin'ny Lalana Afovoany (Central Street) raha nitranga ny toe-draharaha. Ny lahatsary sy ireo sary etsy ambany no mitatitra ny sasany amin'ireo zava-nitranga…
Mbola ifandirana ny antsipirihan'ny zava-nitranga hatramin'izao, fa ny sasany nihogahoga fa nihoatra ny sakana napetraky ny polisy i Grant ka dia nisy manamboninahitra iray nanatona azy, ary ny hafa kosa nilaza fa ny fihetsika nataon'ilay manamboninahitra no nahatonga an'i Grant hihoatra ny sakana.
Mpanao fihetsiketsehana teo am-panaovana ny diabe
Nosamborina i Grant ary notazonina tao amin'ny komisarià akaiky. Tsy ela dia nanao fihetsiketseha-panoherana teo anoloan'ny komisarià ny andian'olona maro, mandra-pamotsorana an'i Grant enina ora taty aoriana; nafana ny adihevitra tao amin'ny “Vondrona Facebook Lehibe indrindra an'i St. Kitts sy Nevis”:
Mpanao fihetsiketsehana teo ivelan'ny komisarià.
King Black Coral nanameloka ny polisy tamin'ity zava-nitranga ity:
Henatra raha avadiky ny polisin'ny Skn [St. Kitts and Nevis] ho fihetsiketsehana mahery setra ny fihetsiketsehana milamina. Raha norombahin'ny singan-jiolahy ny federasiona aiza moa ry zareo[?] Mampalahelo ny miteny fa nanimba ny hatsaran'ny tanintsika indray ny endrika ratsin'ny politika. Nanatrimaso aho fa mitombo miandalana izy ity ary miverina amin'ny zavatra mitovy indray fa amin'ny lafiny hafa. Ilaina faranana ity mifanipinipy ity fa raha tsy izany potika tanteraka ny federasiona.
Eural Huggins miady hevitra amin'izany ary mahatsapa fa ny mpanao fihetsiketsehana no tompon'antoka lehibe:
Ny olona tahaka anareo milefitra amin'ny zavatra diso noho ny fanararaotana politika… nijery ny lahatsary ve ianareo? Ny zavatra takiany dia hoe nidina teny an-dalambe ry zareo satria nihazakazaka ny ghaut [?]… eny ary, raha manao filaharana ianareo ka mahita ny barazy, nahoana moa ianareo no mandroso raha milaza fa milamina (tsy mikorontana na manao herisetra?) Nisy ny zavatra hafa azo natao tsy neken-dry zareo atao.
Sheldon Pemberton nampitaha ny hetsika fanoherana ankehitriny tamin'izay nataon'i Denzil Douglas taloha:
1993: Nitarika fihetsiketsehana tsy ara-dalàna maherisetra nanavatsava n lalan'i Basseterre ny Dr Douglas. Iza no vonona ho faty hiato ny demokrasiantsika miaraka amin'i Lindsay Grant[?] Tonga ny fotoana ho an'ny firenen'i Davida hanjera an'i Goliath sy ny namany. Moa ve handray an-tanana ny Hoavim-pahafahany ny Vahoakan'i Davida [?] Antsika ny safidy. Ary manana ny Sandany ny Fahafahana. Andao aseho amin'izao tontolo izao sy amin'ny zanatsika fa vonona handray sy hanangana ny firenentsika isika ary hanaisotra azy amin'ny ziogan'ny [taolambalanoranon'ny] jadona.
Latisha Richard nino fa ny fihetsiketsehana dia tsy politika fa fomba fisaina sy fanao:
Nahoana ny vahoaka miteny fa vonona ny ho faty ho an'ny mpanao politika?? Manao diabe ho amin'ny demokrasia ve mamono [tena] ho an'ny politisiana? Avy eto tiantsika ny miteny fa tsy mijoro ho amin'ny teny filamatry ny firenena ny vahoaka… oviana no isy olona mahasahy mijoro mazava raha mbola manjavozavo (ao aminy)… ny mampalahelo dia ireo olona milaza izany zavatra izany tsy mbola matoky ny hahazo asa ary mbola mifandramatra.
Saingy, manao teny roa i E Naevisia Scarborough momba ny natioran'ny fihetsiketsehana, raha jerena ny tantaran'ny fihetsiketsehana ao amin'ny nosy:
Tamin'ny 1967, 13 taona ny reniko tamin'izany, tamin'ny 1993 indray 14 taona aho tamin'izany, ary amin'izao 2013 izao indray dia 13 taona ny zanako lahy. Taranaka telo, tsy misy afa-tsy zazakely, matahotra an'itony karazana rotaka itony fa ny vahoaka mino fa ok satria ……. tsy milefitra (manaiky) ny '67, '93 na 2013 aho. Mila miara-mihetsika isika. Maro amin'ny vahoaka no miteny fa nilamina ny diabe saingy hatraiza moa izany [?] Atoa Grant no nampipoaka ny toe-draharaha. Raha mieritreritra isika rehefa fa manan-jo handeha amin'ny toerana rehetra tiana aloha amin'ny fotoana rehetra, ahoana moa no izy irery no nanao izay hanitsakitsahana ny lalàna ary izy irery ihany no nosambornia [?] Mety ho maro ny olona nipetraka tamin'ny dabilio tamin'ny alina. Saingy hitanareo, manombana aho fa mitady zavatra tiany porofoina Atoa Grant hisamborana azy.
Ny sary amin'ity lahatsoratra ity dia avy amin'i Jeffrey Phipps, nahazoana alalana.
19 ora izaySt. Vincent & the Grenadines